Saaxibtinimada iyo marxaladeheeda Q2aad :
Saaxibtinimada iyo marxaladeheeda Q2aad
2-Saaxibtinimda iyo dhalin yarada..
Sxptnmdu markan waxay noqta mid kasi baxad weyn marki hore iyadoo tii hore kaga duwan; waxsiin badan, wax wadagid ka baladhan tii hore, is caawimad. Ilmaha qaangadhay wuxu raadiya jiil uu ka helayo qaabka ay u sheekaystan, qaabka ay u wada socdan, qaabka ay u nool yihiin, qaabka ay u wadagaan dhib iyo dheefba, wuxuna iska ilaasha ama ka fogada kuwa dhaqakoda uu u arko mid xun ama dhaqankodu dhibaato keenayo, kuwas anay ka helen waxyabaha u ka helo ama daneyo samayntoda. Saaxiibtinimada dhalin yaradu waxay diirada saraan wadagida danaha ay midka ka yihn,waxyaabaha ay qimeyan,kaftan iyo sheekoyin ay waqtiga isku dhaafiyaan, wax wada odorosud iyo inay waxbarashada iska caawiyaan, dacadnimo, iyo inay kooxo samays taan.
kumana astaysna wada ciyarid jidh ahaned taso ay caan ku thy sxptmda waqtiga ciyalka la yhy.
Cilmi badhis ay samaysa jamacada Texas, waxay ku imtixamen in ka bdn 9,000 ciyal American ah si ay u tibaxan sida ay u mareyan hab dhaqankoda dhibatada kena sida dagal iyo cayda taaso la xidhidha saaxiibtinimadoda.
Waxay so saren warbixin ah in dhalinyaradu ay aad u yartahay in ay ku dhacan dhaqan dhibato ah marka ay saaxiibo fican school ka ku leyihiin,Markay ka qayb qaatan hawlaha schoolka, iska ilaaliyan balwada,iyo dhamaanba maandoriyaha, ay haystaana waalid iyo bareyaal kolkasta siiya waano iyo dhiiri gelin, maskax ahaana ay caafimad qabaan.
Taas lidkeda waxay heleen in dhalintu ay hab dhaqan dhibato leh sameyaan.
Samayntu uu saaxiibku ku le yahay in uu baro dhaqamo xun waxay badana ku xidhan tahay inta uu saaxiibki xun yahay, in anay helin waxbarsho iyo waalid ilaaliya, iyo in saaxiidisa schoolku xumadan.
Qofkuna wuxu yahay sida u yahay jaalihisa uu la socdo.
Waa marxald u bahan in waalidku ay fiiro faara u yeshaan cida ilmahodu saaxiibka la yahay.
Cilmi baadhis kale oo ay samaysay jamacada Purdue University waxay ku xaqiijiyeen in saaxiibtimida xiliga dugsiga sare samaysan taa ay ka waqti dheer tahay tan ka horaysa.
W/Q: siccid Axmed
Previous PostMaxaa sababy midab takoorka iyo quudhsiga ina afeeyey?
Next PostWELWELKA IYO SIDA LOO JOOJIYO!